Collage Freeware Picasa 3 - Mee a Foto dị collage maka Free
Picasa bụ flashy na ọtọ free foto management na-edezi software nke-enye gị ka collage si ndebiri. Ọ bụ ezie na m na-atụ anya ka mma nzukọ na ndị ọzọ dị ike nchọgharị ike, Picasa bụ magburu onwe ya n'ihi beginners na amu amu dijitalụ foto ndị chọrọ iji hazie ha niile Foto ndị dị na ike mbanye, idozi ha albums, ka foto collages, welie ha photos, ma na-eso online na ndị enyi na ezinụlọ.
Picasa 3 na-ahapụ gị ka foto collages na post photos ka online web album kpọmkwem site Picasa na Windows kọmputa ma ọ bụ iPhoto na Macs. Picasa 3 bụ otu nke kasị mma foto collage onye na ahịa, karịsịa ọ bụ freeware.
Uru na ọghọm nke Picasa collage Freeware
• Ọ bụ isi aga-eme maka free
• enye red-anya mwepụ, ngwa mmetụta, na dị iche iche online nkekọrịta nhọrọ.
• Wụt gị foto dị ka a omenala screensaver, collage, ma ọ bụ slide show nkiri.
• Ezubere maka mbido ọrụ na-amu amu dijitalụ foto.
• Ọ bụghị ọtụtụ foto collage ndebiri.
• ike ka foto akwụkwọ, ekele kaadị na kalenda.
• A nchekwa dabeere na usoro nke nzukọ a na mgbagwoju anya.
• Limited mkpado na-achọ atụmatụ.
Olee otú Jiri Picasa Mee a Photo collage
Mgbe ị rụnyere Picasa, ke akpa Oge na-agba, ọ ga-chọọ na ụdị nile gị foto gị kpọmkwem nchekwa n'ime albums. Oge ọzọ mgbe e nwere ọhụrụ photos kwukwara ndị nchekwa, ha ga-akpaghị aka dị ka Picasa. Nke a bụ nnọọ uru atụmatụ iji hazie a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke dijitalụ photos. Ugbu a, i nwetara photos nke na-eme a collage si free collage ndebiri. Lee n'okpuru banyere esi mee ka a foto collage iji Picasa 3.
Nzọụkwụ 1: Tinye ihe album ma ọ bụ mepụta album & ibubata photos.
Nzọụkwụ 2: Họrọ foto site click-ikpuru ma ọ bụ jiri ịgbanwee-click.
Nzọụkwụ 3: Gaa "ike / Foto dị collage" ma họrọ collage template.
Nzọụkwụ 4: Mee ntọala na ike collage ka ​​oyiyi faịlụ maka kpam kpam free.
Free collage Onye kere Picasa Bara Uru Mmeli mma
• A ederede ngwá ọrụ nke na-ahapụ gị ibipụta captions na na photos.
• The nhọrọ na-egosipụta captions na Mbipụta na slide na-egosi.
• Automatic red anya mgbazi, nke na-arụ ọrụ nnọọ nke ọma.
• A ọhụrụ retouching ngwá ọrụ maka erasing si scratches na blemishes
• A nkwafu foto onyenlereanya
• Online mmekọrịta
• New collage ụdị
• n'Ubi aro na ndị ọzọ
Photo collage Ime echiche na Atụmatụ
Olee otú Jiri Digital Scrapbook Kit
Movie Ime Software: Olee ka a na-emetụ n'ahụ Home Movie
Mfe iji ma nnọọ free video Ntụgharị na-enyere gị na-egwu ziri ezi usoro na kọmputa na ngwaọrụ.
Top 5 Free Android Photo Editor-Best Free Android Photo edezi égwu
Top 5 Best na Free AVI ka MPEG converters
Top 5 Free FLV ka MP3 Ntụgharị
Naghachi My Files Free na naghachi My Files maka Mac
Top 3 Free Photo -Ekiri maka Windows